Marna Hard celi iPhone hor Liiska Ultimate ee Reading e
1 Dib u celi iPhone
Dib u celi iPhone aan ID Apple
Xadidaada Warbixannada Password
Dib u celi iPhone Password
Dib u celi Settings iPhone oo dhan
Dib u celi Settings Network
Dib u celi jailbroken iPhone
Dib u celi farriinta codka Password
Dib u celi iPhone Battery
Dib u celi iPhone la Lugood / iCloud
2 Warbixannada Hard
IPhone Warbixannada adag oo aan Password
IPhone Warbixannada adag oo aan Computer
Hard celi iPhone aan Lugood
Sida loo Hard celi iPhone
Hard celi iPhone vs Warbixannada jilicsan
3 Warbixannada Factory
Factory celi iPhone Talooyin
Factory celi iPhone aan Lugood
Factory celi iPhone aan Password
About Recovery Mode
Hel iPhone ka mid ah Recovery Mode
Ka bixidda iPhone in Recovery Mode laab
Soo Celinta iPhone in Recovery Mode
U dayactir iPhone in Recovery Mode
Dib ugu iPhone in Recovery Mode
Kabsado Data ka iPhone in Recovery Mode
iPod xayiran Recovery Mode
iPad xayiran Recovery Mode
Ku qor DFU Mode on Your iPhone
Ka bixidda DFU Mode on Your iPhone
Kabsado iPhone ku xayiran garoonka DFU Mode
Qalabka iPhone Galaysa DFU Mode
Marna Hard celi iPhone hor Liiska Ultimate ee Reading
Dad badan ma oga waxa iPhone adag keddibna tahay iyo waxa iPhone dib jilicsan yahay. Ha welwelin ku saabsan! Eeg shaxda hoose, ka dibna aad si buuxda u fahmi doonaa faraqa u dhexeeya iPhone adag dib iyo iPhone jilicsan dib. Keddibna jilicsan iPhone ma masixi wixii xog ah oo ku saabsan iPhone, laakiin way adag tahay dib iPhone doonaa. Xaaladdan oo kale, ka hor inta sameeyo dib u adag tahay, waa inaad raacdaa liiska hubinta in la ogaado waxa aad waa hore samee. Maqaalkani waxa uu daboolayaa 3 qaybood. Fiiri macluumaadka aad xiisaynayso:
Part1: iPhone Hard celi vs. Warbixannada iPhone jilicsan
Qeybta 2: iPhone Hard celi Liiska Ultimate
Qaybta 3. Sida loo sameeyo Warbixannada adag u iPhone
IPhone Warbixannada Hard
IPhone Warbixannada jilicsan
Qeexid Ka saar wax kasta oo ku saabsan iPhone ah (u celi in goobaha warshad) Dami iPhone oo guuleysatey
Marka la Isticmaalo • iPhone qaba fayraska;
• iPhone awoodin in ay reboot
• halka ay ka iibinayaan qof kale;
• ariinta ugu halista ah halka ka hawlgala iPhone
• qaboojiyay / qufulan iPhone ama shaqo gaba • iPhone qabtaan dhaqanka hanti
• Waxeey u baahan in la xaliyo dhibaatooyinka qaar yar iPhone
Sida loo sameeyo Waxaa via Lugood ama u oofiyo on iPhone si toos ah Ku hay badhanka Home iyo button hurdada / Wake isku mar muddo 20 ilbiriqsi ilaa aad ka aragto logo Apple ku saabsan iPhone. Fur labada badhamada.
Natiijooyinka qabanayaan Waxaa Masixi dhammaan xogta ku iPhone (in ay ka fogaadaan khasaare xogta, akhri liiska warbixinta ) No xogta khasaaro
Fiiro gaar ah: doorasho adag keddibna waa in la tixgeliyaa kaliya sameeyo dib jilicsan by howleheedii aad iPhone si uu u hubiyo isbedel kasta oo ku dhaca dabeecadda aad iPhone ka dib. Waxaa muhiim ah in la baaro wax kasta oo failure hardware sida qaybaha, batari, SIM ama kaadhka xusuusta ka hor inta doorasho adag dib. Mararka qaarkood, haddii ay dib u jilicsan on iPhone xallin karo dhibaatooyinka aad u jeeda, markaas uma baahnid inaad u noqon lahayd in ay dib u adag on iPhone. Keddibna A adag soo celin doonaa goob iPhone ee ay u qaabeynta hore ay soo reynaya codsiyada dhinac saddexaad oo dhan, xogta, goobaha user, badbaadiyey sirta ah iyo xisaabaadka user. Geedi socodka tirtiri lahaa dhammaan xogta ku kaydsan iPhone.
Wondershare Dr.Fone Ee macruufka - 3 Siyaabo inuu ka soo kabsado Your lumay iPhone Data
Waxaa aad u muhiim ah in la akhriyo liis oo dhan ka hor inta adag damiyo iPhone sida habka ilaa nadiifiyaa xogta oo dhan, goobaha user, codsiyada iyo wax kasta oo waxa lagu kaydiyaa qalabka gebi iyo xogta qaar ka mid ah aan la soo kabsaday karo. By akhriska liiska hubinta, waxaad awoodi doonaan in ay qaadaan dhammaan gurmad lagama maarmaanka ah ee xog muhiim ah ku kaydsan, codsiyada soo bixi, iyo goobaha user haddii kasta iyo wax ka badan ka hor adag damiyo iPhone. Si aad dib u adag ee aad iPhone deg deg ah oo aan xanuun lahayn waxay u baahan tahay qorshaynta ka digtoonaadaan. Liiska warbixinta ee socota waxa uu leeyahay in la raaco ka hor intuusan bilaabin off dib ugu adag:
1. In la abuuro gurmad ah ee dhammaan faylasha muhiim ah oo ku saabsan iPhone : tani waa mid ka mid ah liis hubineed ee ugu muhiim ah oo aad jeclaan lahaa in ay adag tahay ka hor inta raaci damiyo iPhone. Abuuritaanka gurmad ah ee dhammaan macluumaadka muhiimka ah sida SMS, xiriirada, waraaqaha haddii ay jiraan, goobaha, sawiro, videos, muusig iyo xog kale oo ku kaydsan aad iPhone.
2. Samee gurmad ah ee goobaha user on your iPhone : isticmaalaya goobaha, badbaadin iyo dib fursadaha in iPhone, waxaad badbaadin kartaa Wi-Fi sirta ah, Bookmarks browser iyo wax kasta oo Chine bangiyada rakibay iPhone.
3. Diyaari liis ay ku qoran barnaamijyadooda loo isticmaalo si joogta ah, ka hor inta adag dib iPhone, waxaa lagu talinayaa in aad eegto diyaarinta liis ah waa in uu leeyahay iyo inta badan la isticmaali codsiyada.
4. Iska hubi liisanka codsiga hadii ay jiraan , waxaa lagu talinayaa si loo eego qaadashada note ah wax codsiyada saddexaad ku rakiban in aad iPhone ruqsadaha haysta ama lambarka aqoonsiga haddii ay jiraan. Tani waa lagama maarmaan si looga fogaado bixinta weliba in rakibidda kuwa codsiyada muhiim ah.
5. Iska hubi macloomaadkii iyo plugins: waxaa lagama maarmaan ah in la abuuro gurmad ah ee plugins muhiim ah, macloomaadkii iyo widgets ee codsiyada aad jeceshahay rakibay iPhone.
6. Ka saar oggolaansho Lugood ah: waxaa lagama maarmaan ah si meesha looga saaro oggolaansho Lugood ka hor dib u adag ee aad iPhone in ay ka dhibaato oggolaantii free warshad cusub dejinta iPhone isticmaalaya ID Apple oo ku saabsan.
Fiiro gaar ah: Doorashada adag keddibna waa in la isticmaalaa oo keliya xaaladaha dhib aad iPhone khaladaadka ama halka xaqiijinta macluumaadka gaarka ah ka hor inta macaamil ganacsi iib ah. Ka dib markii ay soo socda liiska warbixinta ee dib u adag ee iPhone, waxaad isticmaali kartaa mid ka mid ah laba siyaabood oo ay u dhamaystiraan dib u adag. Nidaamka tallaabo-tallaabo hoos ku qoran kala duwan yihiin lahayd wax yar ku salaysan version macruufka ah ee aad iPhone, si kastaba ha ahaatee, nidaamka ballaadhan isku mid.
Hard Nasashada iPhone la Lugood
Tallaabada 1. Iska hubi nooca ugu dambeeya ee Lugood hor inta aadan bilaabin hanaanka dib u adag. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in updates ugu dambeeyey la casriyeeyay si loo xaqiijiyo nidaam lacag la'aan ah dhibaato ah. Tani waa la baari karaa adigoo isticmaalaya boostada toolbar Lugood iyo hoos-hoos-menu oo muujinaya "hubiyo updates".
Tallaabada 2. Isku aad iPhone si aad u computer. Si aad u adag intiisa kale, waxaa lagama maarmaan ah in ay ku xidhmaan iPhone ay u computer isticmaalaya USB ah. Ka dib markii isku xira iPhone, iyadoo la isticmaalayo "dib Hadda" doorasho. Tani waxay kaa caawin lahaa qaadan gurmad ah oo dhan lagama maarmaanka ah dokumentiyada, sawirada, barnaamijyadooda, xiriirada, goobaha user iyo wax ka badan kombiyuutarka.
Tallaabada 3. Kadib markii uu dhamaystay gurmad ah oo dhamaan macluumaadka lagama maarmaanka ah, waxa aad bilaabi kartaa habka adag dib. Isticmaalka "Soo Celinta iPhone" ikhtiyaarka in Lugood ee habka la bilaabi karaa. Ka dib markii gujinaya ikhtiyaarka, nidaamka jirtey ayaa fariin si loo xaqiijiyo go'aanka. Marka aad xaqiijin go'aanka adigoo riixaya "heshiiya" doorasho, software lagama maarmaanka u ah dib u adag bilaabi lahaa inaad kala soo baxdo.
Hard celi iPhone on iPhone toos ah
Tallaabada 1. Tubada "Guud" doorasho ee xunbo on icon goobaha laga heli karo screen guriga aad iPhone. Marka aad guji "Guud" doorasho, raadi "Dib u celi" fursad u bilaabaya geedi socodka dib u.
Tallaabada 2. Ka dib markii gujinaya ah "Dib u celi" button, raadi "masixi oo dhan content iyo goobaha" doorasho sameeyey dhex arki karaa bogga pop up ah. Tani waxay ka dhigi doonaa "masixi iPhone" doorasho muuqda shaashadda, taas oo markii riixi curiyo doonaa xaqiijinta go'aankaaga.
Tallaabada 3. Xaqiiji dib ugu adag ee aad iPhone in goobaha warshad. Geedi socodka qaadan lahaa garoomo dhowr ah daqiiqo. Habka A oo dhameystiran ka dhigan tahay in mid ka mid ah macluumaadka ku kaydsan hore, codsiyada lagu rakibay ama goobaha user waxaa laga heli karaa iPhone.
Top 5 Software in nadiifi Mac
Sida loo isticmaalo iCloud Kaydinta
List dhamaystiran celi iPhone Password
Sidee loo nadiifiyaa iPhone Guddoomiyaha (iPhone 4)
Sida loo dayactir Sound ee iPhone
Sida loo Delete nuqul Photos / Pictures on iPhone / iPad / iPad mini
> Resource > iPhone > Marna Hard celi iPhone hor Liiska Ultimate ee Reading